द्वन्द्व बुझ्ने आँखीझ्याल - साहित्य - नेपाल
द्वन्द्व बुझ्ने आँखीझ्याल
माओवादी द्वन्द्व र त्यस द्वन्द्वभित्रका आयामहरूलाई नजिकबाट बुझेका पत्रकार/लेखक कति होलान् ? एकदमै थोरै छन् । तिनै थोरैमध्येका एक हुन्, रोल्पाका नवीन विभास । दशक लामो अवधिदेखि पत्रकारितामा द्वन्द्व र राजनीतिक ‘बिट’मा रिपोर्टिङ गरिरहेका विभास रोल्पा सुइना कथासंग्रहमार्फत पाठकबीच आएका छन् । विभासको यो चौथो कृति हो ।
विभासको पुस्तकमा द्वन्द्वको पृष्ठभूमि, यसले सिर्जना गरेको सास्ती, द्वन्द्वरत पक्षले देखाएको क्रान्ति र समृद्धिको सपना, अहिले ती सपनामाथि खन्याइएको चिसो पानीजस्ता विषयलाई आधार बनाएर कथा बुनिएको छ । कथाले रोल्पा–रुकुम भेगको दैनिक जीवन, भौगोलिक विकटता, विषमता, राज्यले गरेको उपेक्षा, त्यस भूगोलको रहनसहन, संस्कृति, माया–पिरतीलाई मिहिन पाराले केलाएको छ । साथै, त्यस भूगोलका प्राय: बासिन्दा अँध्यारोको बत्तीमा पुतली झुम्मिएझैँ सशस्त्र द्वन्द्वमा किन लाम लागे ? कथाहरूबाट राम्रै जानकारी पाउन सकिन्छ । यसर्थ, रोल्पा सुइना आञ्चलिक कथाहरूको संग्रह हो । कतिपय कथा पढ्दा कथाजस्तो नभई अनुभूति, संस्मरण अध्ययन गरिरहेजस्तो महसुस हुन्छ ।
रोल्पा सुइनामा कथाहरूलाई तीन श्रेणीमा विभाजित गरिएको छ, जसमध्ये पहिलो खण्डमा द्वन्द्व कथा, दोस्रोमा द्वन्द्वोत्तर कथा र तेस्रोमा कथा विविध छन् । पहिलो खण्डको ‘बैँस’ शीर्षकको पहिलो कथा निकै मार्मिक छ । जसको सार यस्तो छ : ‘ एक दिन कालो कोट, प्याजी रङको पाइन्ट, कालो चस्मामा ठाटिएका नरेशजंग राजा घोडा चढेर खलङ्गा आउँछन् । अनुहारमा रक्सी फुलेका बाउसाब घोडाबाट ओर्लन्छन् । गर्मी याम सुरु भएपछि यसरी नै खलंगा आउँछन् बाउसाबहरू काठमाडौँ, बर्दिया या नेपालगन्जबाट । कहिले सवारी होइसियो ? लालीकी आमाले सोध्छिन् ।
वरपर नजर डुलाइरहेका बाउसाबले उत्तर नै नदिई सोध्छन्, लाली खै ? उनले नुहाउन कोटखोला गएको बताउँछिन् । बोली भुइँमा नझर्दै बाउसाब घोडा चढ्छन् । केही समयपछि लाली रुँदै घर आउँछे । त्यसबेलासम्म दिलको खसमलाई साँचेको जोवन बाउसाबले लुटिसकेका हुन्छन् । लाली आमाको छातीमा छाँद हालेर रुन थाल्छे । बाउसाबले जसरी अहिले लालीको जोवन लुटे, कुनै समय उसकी आमाको जोवन पनि उसैगरी लुटेका थिए । उनीहरू एकापसमा टाँसिएर लामो समय रोइरहन्छन् । रुवाइको हिक्कासँगै लालीको बोली झर्छ । तर, अपुरो । लालीको अपुरो वाक्य नै बुझ्नलाई काफी भइदिन्छ ।’ बदलाभावले सायद ऊ छापामार बन्छे । कथाको सार भनिरहनै परेन, माओवादी विद्रोह अकारण भएको थिएन ।
द्वन्द्व कथा खण्डमा यस्तै मार्मिक १५ वटा कथा छन् । द्वन्द्वोत्तर कथामा १३ वटा र कथा विविधमा नौवटा कथा समेटिएको छ । पहिलो खण्डजत्तिकै दोस्रो र तेस्रो खण्डका कथा पनि उत्तिकै पठनीय छन् । कथा बुनिएका वाक्य संरचना छोटा–छोटा भएकाले पढ्न सहज छ । माओवादी द्वन्द्व बिस्तारै विस्मृतिको गर्तमा विलिन हुँदै छ । तर, विभासका कथा पढ्दै जाँदा स्मृतिपटबाट विलिन हुँदै गएको पीडा, ज्यादती, सपनाको पसललाई पुनर्ताजगी गराइदिन्छ । ओझेलमा पर्दै गएका विषयलाई कथाका रूपमा पाठकसामु ल्याउनु नै यस पुस्तकको सबल पक्ष हो । पाठकलाई पक्कै जानकारी छ, सशस्त्र द्वन्द्वकाल, अझ त्यसमाथि पनि संकटकालीन अवस्था कस्तो थियो भने रोल्पा–रुकुमका नागरिकलाई सहर पस्न निषेध नै गरिएको थियो । माओवादी त माओवादी भइगए, गैरमाओवादीहरूले समेत सहरलाई आफ्नो मान्न पाउँदैनथे ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनेहरू मात्र होइन, स्वयं राजाको शासनलाई स्वीकार गर्नेहरूलाई समेत खुंखार माओवादी देख्थे सुरक्षाकर्मीहरू । आफ्नो जन्मथलो रोल्पा–रुकुम भन्नेबित्तिकै ठूलै माओवादी सिकार फेला परेको ठान्थे उनीहरू । जस्तो कि, रोल्पामा जन्मिएकै कारण सुरक्षाकर्मीले ब्रिटिस लाहुरे तथा ०४८ को आमनिर्वाचनमा रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद बर्मन बुढाका ज्वाइँलाई ललितपुरस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिई चरम यातना दिएर हत्या गरेको थियो । उनी त एक उदाहरण मात्र हुन् । राजधानीमा बसेकै आधारमा सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएका, बेपत्ता पारेका र हत्या गरिएका यस्ता पात्र दर्जनौँ छन् । अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य घरायसी कामले नै किन नहोस्, सहर पस्नेबित्तिकै यस्तो नियति भोग्ने रुकुम–रोल्पालीको लस्कर ठूलै छ । यही नियति भोग्न बाध्यमध्येका एक पात्र हुन् विभास पनि । अध्ययनका लागि काठमाडौँ छिरेका उनी द्वन्द्वको निर्मम नियति भोग्न बाध्य भए । झन्डै ६ महिना सुरक्षा निकायले उनलाई बेपत्ता बनायो । यही पीडा भोगे/बुझेकाले हुन सक्छ, उनका कथामा यस्तै नियति भोग्न बाध्यहरूको पीडा र सुस्केरा छ ।
कथा न हो, कृत्रिम शिल्पशैलीमा बुने पनि हुन्छ भन्ने बुझाइबाट पृथक् भेटिन्छन् विभास । उनका कथामा सत्य भेटिन्छ । कथामा उनी कतै नारीवादी देखिन्छन् । कतै विद्रोही, कतै आश्वासनको पोका बाँड्ने अभियन्ता, कतै पीडित । पुस्तकमा केही दुर्बलता अवश्य छन् । आञ्चलिक स्वाद भएकाले पाठकलाई भाषा, प्रस्तुति बुझ्न कठिन हुन्छ । तर, सामान्य दुर्बलताका बाबजुद विभासको रोल्पा सुइना वर्तमान समयमा नपढी नहुने एक गहकिलो कृति हो । विभासको यो पुस्तक पढिभ्याउँदा उनले द्वन्द्वबाट निस्किएको पीडा नजिकबाट नियालेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
लेखक : नवीन विभास
पृष्ठ : ३२२
मूल्य : ३३५ रुपियाँ